ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ခေါင်းစဉ်အောက်က ဘူဖွန်နဲ့ PSG အသင်းတို့ရဲ့ ဇာတ်ပေါင်းခန်း
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ခေါင်းစဉ်အောက်က ဘူဖွန် Buffon နဲ့ PSG အသင်းတို့ရဲ့ ဇာတ်ပေါင်းခန်း
9 Jul 2018 . 5:03 PM
အသက်(၄၀)မှ ဘ၀စတယ်ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီစကားက ဘူဖွန် Buffon အတွက် ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်နေမလားပဲ။ အသက်(၄၀)အထိရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုကို ဆာလောင်နေဆဲ၊ နိုင်ပွဲတွေကို တပ်မက်နေဆဲ။ ဘောလုံးလောကမှာ အသက်(၄၀)အထိ ကျင်လည်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘူဖွန်အတွက်တော့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်ဆိုတာ “ချို(ဂျို)”နဲ့လားလို့တောင် မေးလို့ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်က ကစားသမားသက်တမ်းတစ်ဝက်လောက်ကစားခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တော့ ဘူဖွန် ဘောလုံးသမားဘ၀ကို ကန့်လန့်ကာချတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘူဖွန်ဆိုတာက Warrior တစ်ဦးပါ။ သူဟာ တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့ အမြဲအသင့်ရှိနေတတ်သူ။
ဒါကြောင့် ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG အသင်းကို ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ “PSG အသင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေက ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ သူတို့က ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်ဖို့အတွက် အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူပေးလိုတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စွမ်းအင်တွေ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ အောင်မြင်မှု ဆာလောင်စိတ်တွေကို ဒီအသင်း အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ပေးဆပ်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြင်ပမှာ ပြောင်းရွှေ့ကစားတာက ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ မျှော်လင့်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဘူဖွန်က ဆိုခဲ့တယ်။ (၁၇)နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ အရိပ်ကို စွန့်ခွာခဲ့သူ ဘူဖွန်ဟာ PSG အသင်းနဲ့ တစ်ရာသီ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။ ဘူဖွန်နဲ့ PSG အသင်းတို့ ဇာတ်ပေါင်းခန်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။
ဘူဖွန်ဟာ ကစားသမားဘ၀ (၂၃)နှစ်တာကာလအတွင်း စီးရီးအေ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားအပါအ၀င် ဆုဖလားပေါင်းများစွာ ရယူခဲ့ဖူးပေမယ့် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ချန်ပီယံလိဂ်ကို တစ်ခါမှ မရဖူးသေးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုင်မြှောက်ခွင့်ရဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထား ရောက်ခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားဘွဲ့နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွေမှာ ဗိုလ်လုပွဲရောက်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပဲရခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတ်ခင် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ကိုင်မြှောက်ဖို့ ဘူဖွန် ဆန္ဒပြင်းပြနေလိမ့်မယ်။
ဒီလိုပါပဲ၊ PSG အသင်းရဲ့အဓိက ပစ်မှတ်က ချန်ပီယံလိဂ်ပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိ ဘုရင်တစ်ပါးလို မင်းမူနေရုံနဲ့ PSG အသင်းပိုင်ရှင်တွေက ကျေနပ်မှုမရှိဘဲ ဥရောပအထိ သူတို့ရဲ့ Emperor ကို ချဲ့ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း သုံးလိုက်တဲ့ငွေတွေ၊ ခေါ်ယူလိုက်ရတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ၊ ရာထူးက ထုတ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်နည်းပြတွေ မနည်းမနောပါ။ အခု သူတို့ဆီမှာ နေမာ၊ ဘာပေ၊ ကာဗာနီ တို့လို Best Of The Best တိုက်စစ်အတွဲရှိနေပြီ ကွင်းလယ်နဲ့ခံစစ်မှာလည်း World Class တွေ ရှိနေပြီ။ ဂိုးပေါက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ၀ါရင့်ဂိုးသမားတစ်ယောက် လိုနေတာကြောင့် ဘူဖွန်ကို ခေါ်ယူလိုက်တာပါပဲ။ PSG အသင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ ဘူဖွန်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေ ပေါင်းဆုံခြင်းရလဒ်က ချန်ပီယံလိဂ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာက လာမယ့်ရာသီမှာ အဖြေပေါ်လာမှာပါ . . .
ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ဘူဖွန် ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုများ
Photo:Twitter,The Sun,MacMadison News
ခနျြပီယံလိဂျဖလား ခေါငျးစဉျအောကျက ဘူဖှနျ Buffon နဲ့ PSG အသငျးတို့ရဲ့ ဇာတျပေါငျးခနျး
အသကျ(၄၀)မှ ဘဝစတယျဆိုတဲ့ အနောကျတိုငျးဆိုရိုးတဈခုရှိပါတယျ။ ဒီစကားက ဘူဖှနျ Buffon အတှကျ ရာနှုနျးပွညျ့ မှနျကနျနမေလားပဲ။ အသကျ(၄၀)အထိရှိနပွေီဖွဈပမေယျ့ အောငျမွငျမှုကို ဆာလောငျနဆေဲ၊ နိုငျပှဲတှကေို တပျမကျနဆေဲ။ ဘောလုံးလောကမှာ အသကျ(၄၀)အထိ ကငျြလညျဖို့ဆိုတာ တကယျမလှယျတဲ့ကိစ်စပါ။ ဒါပမေဲ့ စိနျချေါမှုတှေ အမြားကွီးကို ရငျဆိုငျကြျောဖွတျခဲ့ဖူးတဲ့ ဘူဖှနျအတှကျတော့ စိနျချေါမှုအသဈဆိုတာ “ခြို(ဂြို)”နဲ့လားလို့တောငျ မေးလို့ရတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျက ကစားသမားသကျတမျးတဈဝကျလောကျကစားခဲ့တဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တော့ ဘူဖှနျ ဘောလုံးသမားဘဝကို ကနျ့လနျ့ကာခတြော့မယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘူဖှနျဆိုတာက Warrior တဈဦးပါ။ သူဟာ တိုကျပှဲတှဆေငျနှဲဖို့ အမွဲအသငျ့ရှိနတေတျသူ။
ဒါကွောငျ့ ပွငျသဈထိပျသီးကလပျ PSG အသငျးကို ပွောငျးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။ “PSG အသငျးရဲ့ အိပျမကျတှကေ ဘာလဲဆိုတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ။ သူတို့က ပရိသတျတှေ စိတျကနြေပျဖို့အတှကျ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူပေးလိုတာပါ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ စှမျးအငျတှေ၊ အတှအေ့ကွုံနဲ့ အောငျမွငျမှု ဆာလောငျစိတျတှကေို ဒီအသငျး အောငျမွငျမှုရဖို့အတှကျ ပေးဆပျသှားမှာပါ။ ကြှနျတေျာ့ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ကိုယျ့နိုငျငံ ပွငျပမှာ ပွောငျးရှကေ့စားတာက ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈပွီး ပွညျပမှာ အောငျမွငျမှုရဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြအတှကျဖွဈပါတယျ” လို့ ဘူဖှနျက ဆိုခဲ့တယျ။ (၁၇)နှဈကွာကစားခဲ့တဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ အရိပျကို စှနျ့ခှာခဲ့သူ ဘူဖှနျဟာ PSG အသငျးနဲ့ တဈရာသီ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တယျ။ ဘူဖှနျနဲ့ PSG အသငျးတို့ ဇာတျပေါငျးခနျးက ရညျရှယျခကျြကိုယျစီနဲ့ပါ။
ဘူဖှနျဟာ ကစားသမားဘ၀ (၂၃)နှဈတာကာလအတှငျး စီးရီးအေ၊ ကမ်ဘာ့ဖလားအပါအဝငျ ဆုဖလားပေါငျးမြားစှာ ရယူခဲ့ဖူးပမေယျ့ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ခနျြပီယံလိဂျကို တဈခါမှ မရဖူးသေးဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကိုငျမွှောကျခှငျ့ရဖို့ အနီးစပျဆုံးအနအေထား ရောကျခဲ့ပမေယျ့ အကောငျးဆုံးအရှုံးသမားဘှဲ့နဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။ ၂၀၀၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈတှမှော ဗိုလျလုပှဲရောကျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပဲရခဲ့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတျခငျ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ကိုငျမွှောကျဖို့ ဘူဖှနျ ဆန်ဒပွငျးပွနလေိမျ့မယျ။
ဒီလိုပါပဲ၊ PSG အသငျးရဲ့အဓိက ပဈမှတျက ခနျြပီယံလိဂျပါ။ ပွညျတှငျးမှာ ပွိုငျဘကျမရှိ ဘုရငျတဈပါးလို မငျးမူနရေုံနဲ့ PSG အသငျးပိုငျရှငျတှကေ ကနြေပျမှုမရှိဘဲ ဥရောပအထိ သူတို့ရဲ့ Emperor ကို ခြဲ့ဖို့ ခွလှေမျးပွငျနတေယျ။ အဲဒီအတှကျလညျး သုံးလိုကျတဲ့ငှတှေေ၊ ချေါယူလိုကျရတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ၊ ရာထူးက ထုတျခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောနညျးပွတှေ မနညျးမနောပါ။ အခု သူတို့ဆီမှာ နမော၊ ဘာပေ၊ ကာဗာနီ တို့လို Best Of The Best တိုကျစဈအတှဲရှိနပွေီ ကှငျးလယျနဲ့ခံစဈမှာလညျး World Class တှေ ရှိနပွေီ။ ဂိုးပေါကျကို စောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျ ဝါရငျ့ဂိုးသမားတဈယောကျ လိုနတောကွောငျ့ ဘူဖှနျကို ချေါယူလိုကျတာပါပဲ။ PSG အသငျးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြ၊ ဘူဖှနျရဲ့ ကစားသမားဘ၀ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပေါငျးဆုံခွငျးရလဒျက ခနျြပီယံလိဂျဖွဈလာမလားဆိုတာက လာမယျ့ရာသီမှာ အဖွပေျေါလာမှာပါ . . .
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ဘူဖှနျ ရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုမြား